Ememe ncheta nke 30 nke Association Movie “Enwetara m nnukwu ogbo!” | Ota Ward Cultural Promotion Association
Ihe nkiri ahụ "Enwetara m nnukwu ebe!" Bụ ihe nkiri nkeji 30 nke Ota Ward Cultural Promotion Association rụrụ ọrụ iji cheta ụbọchị ncheta XNUMXth nke ntọala ya.
Onye isi ochichi ahọpụtara site na nyocha site na nyocha mbanye.
Ọtụtụ ndị bi na ngalaba a dị ka mgbakwunye, ma gbagburu ọtụtụ n’ime ha na Ota Ward.
Nyocha bụ ụdị ihe nkiri ọhụrụ nke onye ọ bụla nwere ike ịlele n'efu site na ihe nkiri na ịntanetị.
Onye isi oche ahụ bụ Daisuke Miki, onye meriri Grand Prix n'ọtụtụ ememme nkiri dị ka TAMA NEW WAVE ma na-emepụta ihe karịrị 100 mgbasa ozi n'ịntanetị kwa afọ.
Nịm na a ọha omenala owuwu, ọ bụ ihe na-akpali akpali ntochi na-achị ọchị na anya mmiri na-aga site na ikpeazụ ujo! !!
"Izu ohi! Are bụ onye isi na-eme ihe nkiri!"
Hana Niwano, onye na-arụ ọrụ nwa oge na ụlọ ahịa croquette na-achọ ịbụ onye na-eme ihe nkiri, bịakwutere otu ụbọchị site na otu agadi nwoke nwere obi abụọ, Kusaburo, onye na-enweghị afọ ndụ.
Kusaburo, onye chọrọ imezu nrọ ya nke iduzi nwunye ya nwụrụ anwụ na-eduzi ebe ihe nkiri, na-anwa iweghara ọkwa a site na ilele mpempe akwụkwọ nke "30th Anniversary Theater Event" nke ọ hụrụ n'otu ụlọ ọrụ ọdịnala dị nso. Echere m banyere ya .
Aha ogbo a bu “Nwoke Ebube”. Ọ bụ ọrụ ama ama dabere na ezigbo akụkọ banyere Helen Keller, onye meriri oke aka ike nke "adịghị ahụ anya," "adịghị anụ ọkụ," na "enweghị ike ịnụ anya," na Prọfesọ Sullivan, "onye ọrụ ebube" onye nyere ya ọkụ.
Hana, onye ka funahụrụ akwụkwọ nyocha ahụ na Himeko, onye ọrụ nwa oge, kpebiri ịbanye na ọhụụ a.
N'ụzọ dị otú a, nnukwu ọzụzụ pụrụ iche site n'aka nna nna ahụ ghọrọ onye na-eme ihe nkiri.
Enwere ike imikpu ogbo ahụ?Gịnị bụ nna nna ogbo takeover atụmatụ na-eri ndụ ya? ??
Hana Niwano Nwatakịrị nwanyị nke na-arọ nrọ ịbụ onye na-eme ihe nkiri.Ọ bụ nkà, ma mgbe ụjọ na-atụ ya, ọ na-eyịm.
Amụrụ na mpaghara Nagasaki na 2000.Dịka onye na-eme ihe nkiri, ọ na-arụsi ọrụ ike na TV, ihe nkiri na mkpọsa ngwá ahịa. A ga-ewepụta ihe nkiri atọ na 2017.Nnukwu ihe ngosi gụnyere CX "Obi ụtọ TV Sukatto Japan", mgbasa ozi "Kirin", "SONY", "Ginza Color", wdg.
Himeko Yukitani Otu agadi na ọrụ nwa oge Hana.Achọrọ m ịbụ onye na-eme ihe nkiri ruo ọtụtụ afọ.
Amuru na Ota Ward.Onye na-eme ihe nkiri nke Production Jinrikisha.Starring na ihe nkiri "Instant Swamp" (2005), "Turtles bụ ihe ijuanya ngwa ngwa" (2005), "Inmụ ahụhụ na-adịghị depụtara na Foto dị na Foto" (2007), "Achilles and the Turtles" (2008), "Nekonin" (2017) )) Na ọtụtụ ndị ọzọ.
Saburo Ota (nke a na-akpọkarị nna nna)
Ọ nọbu na-eme ihe nkiri.Kpebisie ike ịnọ na-ezu ohi iji mezuo nrọ ya na nwunye ya nwụrụ anwụ
Ejiri ya dị ka ọrụ ndụ rakugo nke na-anọchi otu nwoke na conte oge gboo.Onye nnọchi anya na-arụ ọrụ: Ihe nkiri "Kidsmụaka laghachi", "Nwoke m", "Mt. Tsurugidake", TV "Sansu Detective Zero", "Naoki Hanzawa", wdg.
Tamatsutsumi Onye nduzi na-enyo enyo nke na-abụghị nwanyị ma ọ bụ onye nzuzu na ego.
Mgbe arụchara ọrụ dị ka rakugoka n'ụdị Tachikawa, sonyeere ndị agha Takeshi.Na mgbakwunye na ịbụ onye nwere onyinye na onye na-eme ihe nkiri, ọ bụ onye na-ede ihe nkiri maka ihe nkiri "Bus igbu onwe ya" na onye nduzi na onye na-ede ihe nkiri maka ihe nkiri "Shichinin no Tomura". O dere akwụkwọ n’afọ 2012.Ọ bụ onye edemede nke "Nwoke Pavlov".
Onye nnochite anya Director nke Movie Impact Co., Ltd.A na-ewepụta ihe nkiri a "Anya mmiri nke Cyclops", "nke m", "Yokogawa Suspense", wdg.Ọ na-ewepụta onyonyo ndị anaghị agakọ n'ụdị, dị ka ndị isi ihe nkiri, ndị isi ihe omume tiivi, na ndị isi azụmahịa.
Ihe nkiri ahụ "Enwetara m nnukwu ogbo!" Ugbu a dị na YouTube!
Nweta YouTube site na ekwentị gị, mbadamba, ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ!
N'ezie ị nwere ike ịnụ ụtọ ya n'efu.
YouTube "Enwetara m nnukwu ogbo! (Versiondị 4K)" (Nkeji 96)
YouTube "Enwetara m nnukwu ogbo! (Trailer)"
Pịa ebe a maka saịtị pụrụ iche nke ihe nkiri ahụ "Enwetara m nnukwu ogbo!" !!